Mareykanka oo musaafurinaya 100 qof oo Soomaali ah | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Mareykanka oo musaafurinaya 100 qof oo Soomaali ah
Mareykanka oo musaafurinaya 100 qof oo Soomaali ah
Dowladda Madaxweyne Donald Trump ayaa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha lagu wadaa inay Somaliya dib ugu celiso ku dhawaad 100 qof oo Soomaali ah.
Tani ayaa waxaa qoysaska dadkaasi u xaqiijiyay qareenadii difaaceysay, oo u sheegay in maalmaha foodda inagu soo hayo dib loogu celin doono dalka Somaliya.
Sida laga soo xigtay qareenada dadkan, waxaa qaarkood lagu helay inay dembiyo ka gaysteen dalka Mareykanka, halka qaarkoodna aanay jirin wax dembi ah haba yaraatee oo lagu helay, loona diiday in qaxootinimo loo qaabilo amaba deganaansho in dalkaasi laga siiyo.
Hooyo Maryama oo ah hooyo Soomaaliyeed oo dalka Mareykanka ku nool ayaa sheegtay in dadka la celinayo uu ku jiro wiil 26 jir ah oo ay dhashay, kaasoo ay sheegtay in lagu soo wargeliyay in dib loogu celinayo Somaliya.
Hooyo Maryama oo la hadashay BBC ayaa sheegtay inaanu wiilkeeda dad dilin, dad kalana dhicin, isla-markaana uusan jirin wax dembi ah oo dalka Mareykanka uu ka galay, iyadoo intaa ku dartay inay garan waayeen dembiga dalkaasi looga soo musaafurinayo.
Hooyadu waxay sheegtay in qareeno kala duwan ay u qabteen wiilkeeda, oo dhawr carruur ahi ku dhalay dalkaasi Mareykanka. Arrinta ay ka walaacsan tahay ayaa ah carruurtii uu dhalay oo aabahood laga fogeynayo.
Sidoo kale waxay walaac ka muujisay, iyadoo wiilkeeda aanay wax ehel ahi u joogin Somaliya, isla-markaana ay waalidiintii iyo walaalihiiba jooggaan dalkaasi Mareykanka.
Jeylaani Xuseen, Madaxa Ururka Care ee u dooda xuquuqda Muslimiinta Mareykanka ee Gobolka Minnesota ayaa sheegay in dembiyo kala duwan lagu haysto Soomaalida la musaafurinayo, balse intooda badan loo hayso sharci la’aan, isla-markaana ay ku jiraan dad sharciyo dalbaday oo loo diiday.
Jeylaani Xuseen oo wax laga weydiiyay bal inay la xiriireen Safaaradda Somaliya ee Washington iyo Dowladda Somaliya ayaa xusay inay la xiriireen Safaaradda iyo dad kaloo badanba, iminkana ay ku hawlan yihiin, sidii Dowladda Somaliya ay go’aan uga gaari laheyd dib u soo celinta dadkaasi.
Maaha markii ugu horeysay oo dad Soomaali ah laga soo musaafuriyo dalka Mareykanka, tan iyo markii uu xafiiska qabtay Madaxweyne Donald Trump.